Umgangatho ophezulu we-Acoustical, ipaneli yodonga lwe-3d, iithayile ze-acoustic, abenzi bepaneli yokutsala i-acoustic kunye nabathengisi | UVinco
Unyango lwe-acoustic bass
Ibhodi ye-Acoustic, ibhodi engenasandi, isandi sodwa ...
Ukuxhoma iipaneli ze-acoustic, ixabiso lephaneli ye-acoustic, isandi ...
Amafu esilingi, ipaneli ye-acoustic emisiweyo
Isasazi somthi studio
Iphaneli yomthi yokhuni, iplanga lomthi i-acoustic panel, ukhuni ...
Ubunzima obulayishwe i-vinyl 2lb, isithintelo sevinyl
Umqobo we-Acoustics, amakhethini e-acoustic, ingubo ye-acoustic
Imiphezulu ive Inkqubo yemveliso iyomzimba kwaye inobuhlobo, akukho manzi amdaka, ukukhutshwa, inkunkuma,. akukho ngcina, Ubunjani beplastikhi yephaneli ye-acoustic iyenza ukuba izwakale njenge-insulative kunye ne-thermal insulative.
Iipaneli zethu ze-acoustic zePET ezingezizo ityhefu, ezingezizo i-allergenic, ezingacaphukisi kwaye aziqulathanga izibophelelo ze-formaldehyde kwaye zinesandi esiphakamileyo (NRC: 0.85).
Iphaneli yePolyester fiber acoustic
Iphaneli yePolyester fiber acoustic yenziwe nge-100% yefayibha, emva kokucinezelwa okushushu kwimilo yomqhaphu. Kwaye sisebenzisa i-hot- press eyahlukeneyo ukufikelela kuxinano olwahlukileyo kwaye siqinisekile ukuba kungena umoya, okwenza ukuba ibe sisandi esihle kunye nokuthambisa iimveliso.
Igama lemveliso Iphaneli yePolyester fiber acoustic
Izixhobo I-100% yefayibha esemgangathweni ephezulu
Ubungakanani 1220 * 2440 * 9 / 12mm (enye ubukhulu ungenziwa ngemfuneko)
Ukuxinana 160- 229kg / M3
Umbala Itshathi yemibala
Isiphumo sokufunxa isandi 0.85
Resistant yoMlilo IBakala B1
Ezendalo IBakala E1
Imilo ye-Angle Chamfer, ngqo
Ukusetyenziswa Studio, enkulisa, cinema, studio, njl.
Iphaneli yePolyester yefayibha yemifanekiso:
Iphaneli yepolyester yefowuni i-acoustic eziluncedo:
2) Eco, Non-ngevumba, uKhuseleko kwaye kulula ukuyicoca
3) ukusebenza Good zokuhombisa, kwaye ngaphezu kwama-40 iintlobo imibala
Iphaneli ipholiyesta ifayibha acoustic isicelo:
Isetyenziswa ngokubanzi kwizindlu zeopera, iiholo zemiboniso bhanyabhanya kunye nomabonakude, amagumbi okurekhoda, amagumbi osasazo, izitishi zeTV, iiholo zemisebenzi emininzi, amagumbi enkomfa, iiholo zekhonsathi, iiholo, iindawo zolonwabo kunye nezolonwabo, iihotele, iKTV, njl.
Impahla iya kupakisha kwiingxowa ezininzi
Zothutho: Ngu elwandle okanye ngomoya
1. Umsebenzi - Sinabasebenzi abathengisayo. Nayiphi na imibuzo iya kuphendulwa kwisithuba seeyure ezingama-24.
2. Ixabiso-Kuba siyifektri, ke sinako ukubonelela ngemveliso ephezulu kunye nexabiso eliphantsi.
3. Inkonzo-Kulula kwaye kulula ukuhambisa, sithembisa umhla wokuhanjiswa ngexesha, kunye nenkonzo elungileyo emva kokuthengisa.
4. Iqela-Sinesebe lethu lobunjineli, ngokwesicelo sakho senzelwe imveliso yakho.
1. Siyavuya kakhulu ukuba abathengi basinika isindululo sexabiso kunye neemveliso.
2. Ukuba kukho nawuphi na umbuzo, nceda usazise okokuqala nge-imeyile okanye ngomnxeba. Sinokujongana nabo ngexesha.
1.Ukuba abathengi banalo naluphi na ucwangciso eTshayina, nceda usazise. Singathanda ukukunceda ubhukishe ihotele kwaye sikuthathe kwizibuko lomoya, okanye isikhululo sikaloliwe.
2. Naziphi na ezinye iingxaki, nceda uzive ukhululekile ukubuza, kwaye siya kuzama konke okusemandleni ethu ukukunika!
Ukukhangela phambili umbuzo wakho ngobubele
Egqithileyo Unyango lwe-acoustic bass
Okulandelayo: Ukwahlula ulusu, ulonga ulwahlulo olusongelayo
Q: Uza kuthatha ixesha elingakanani ukwenza iisampulu?
Ngokwesiqhelo siya kuthatha i-1 ~ 7 yeentsuku ukwenza iisampulu.
Q: Liliphi ixesha lokuhambisa kwakho?
Ixesha lokuhanjiswa liphakathi kweentsuku ezili-15-25 emva kokuba sifumene idipozithi, ukunyaniseka, kuxhomekeke kubungakanani beodolo kunye nexesha obeka ngalo iodolo.
Q: Ngaba uya kuhlawula isampuli?
A.Sardard iisampulu zisimahla, kodwa iisampulu ezenziwe ziya kuhlawuliswa ngendleko ezifanelekileyo kwaye zithwala izinto. Emva kokuba iodolo iqinisekisiwe, siya kuyibhatala imali yokubonisa. Nceda uqiniseke ngaloo nto.
A: Intlawulo <= 1000USD, 100% kwangaphambili. Intlawulo> = 1000USD, 30% T / T kwangaphambili, ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa.
Q: Ungayamkela i-OEM?
A: Ewe, njengomvelisi, sinokuvula isikhunta ukuvelisa naziphi na iimveliso zephaneli ye-acoustic ngokwesampulu yakho okanye umzobo.
Ukuba unemibuzo engaphezulu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi, enkosi!
Ukuhonjiswa 3d iiphaneli zodonga, i-acoustic soundproof, ...
Ukufunxa lenjongo, 3d acoustic panel, ukufunxa m ...
Iphaneli ye-Acoustic yokuthintela umsindo, udonga lwe-acoustic til ...